लामखुट्टे देखि हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो छ लामखुट्टे हटाउने घरेलु तरिका सबैले जानिराखौ ! – Jagaran Nepal
लसुन : घरमा लसुन त हुने नै भो । बढी लसुन हालेको खाना प्रयोग गर्नुभयो भने लामखुट्टे लुसन खाएका मानिस बाट टाढा हुन्छ ।
आयुवेर्दिक स्प्रे : लामखुट्टे भगाउने क्रिमहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसलाई छाडिदिनुहोस् । अब तपाईं आफैं घरेलु प्रविधिबाट लामखुट्टे भगाउने स्प्रे बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तुलसी, पानी र भोड्का जस्ता घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरु चाहिन्छन्
घरमा यस्ता चीज भए रिसाउँछिन् लक्ष्मी, भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता, नत्र बढ्छ गरिबीबास्तु दोष भयो भने घरपरिवारमा आर्थिक संकटसम्बन्धी समस्याहरु आउने गर्छ। त्यतिमात्र होइन पारिवारीक माहोल पनि खटपट हुने, सधैँ असफल हुने कारण पनि बन्न सक्छ।